Manampy Ireo Mpitsoaponenana Any Eorôpa Hahazo Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2016 15:05 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Ελληνικά, Italiano, English
Fivarotana finday ao amin'ny Za'atari, tobin'ny mpitsoaponenana Syriana ao Jordana. Loharano: pejy Facebook Zaa'tari Refugee Camp .
Lasa aron'aina ho an'ireo mpitsoaponenana ny Smartphones, nandritra ny dia lavitra nataon'izy ireo, hanomezany ny vaovaon'ny fahasalamany amin'ireo havany any Eorôpa, noho izy ireny nampiasaina tamin'ny fifandraisana sy ny fandaminana tamin'ny alalan'ny media sosialy sy ireo vohikala. Kanefa, manana ny fetrany ihany ny smartphone, satria ny tahirin'ny herinaratrany tsy afaka mihoatra 12-48 ora, ary miankina amin'ny fandrakofana takatry ny tambajotra nasiônaly na ny wifi misy eo an-toerana.
Tyler Jump, avy amin'ny Kaomity Fanavotana Iraisampirenena, nanoratra tao amin'ny lahatsoratra iray an'ny Medium mikasika ny fanontaniana voalohany napetrak'ny mpitsoaponenana iray raha vantany vao tonga any Eorôpa izy ireo. Ny iray amin'ireo, hoy izy, dia “Manana WiFi ve ianareo?”
Tena zava-dehibe ho an'ireo mpitsoaponenana vao tonga ary te-hampandre ireo akaiky azy fa salama izy ireo, ny mifandray amin'ny fianakaviany.
Miankina be amin'ny fahazoana Aterineto mba hiseraseràna ireo mpitsoaponenana, fa misy sakana maro anefa eny amin'ny làlan'izy ireo. Milazalaza ny sasantsasany amin'ireo olana atrehan'ireo mpitsoaponenana ilay mpikaroka Linda Leung, ao amin'ny taratasiny “Mialokaloka ao ambany teknolojia: ny fisehon'ny serasera any amin'ny tobin'ireo mpitsoaponenana sy ny fitazonana ny fifindramonina.” Na ireo mpitsoaponenana any Aostralia aza no nanaovana ny fikarohana, toa miatrika olana mitovy amin'izany ihany koa ireo mpitsoaponenana any Eorôpa:
Tena sarotra ny nitady vola tao amin'ny toby mba hahazoana miserasera.
Nampanofa ny azy ireo olona nanana finday.
Natahotra ireo olona sasany hoe eo ambany fanarahamason'ny fahavalo ireo fianakaviany na ireo namany.
Mety mahatsiaro very ireo mpitsoaponenana raha tsy mahazo vaovao.
Amin'ireo toerana sasany, lafo loatra tsy azo ampiasaina ny “cybercafé”.
Indraindray, tsy afaka mahazo teknolojia na inona na inona ireo mpitsoaponenana. Ho solony, maro ireo mpitsoaponenana miverina amin'ny fifaneraseràna nentim-paharazana, amin'ny alalan'ny fampitàna hafatra amin'ny olona, izay ampiasaina mba hampita vaovao sy manome an-tànana ireo taratasy amin'ireo olona akaiky azy ireo.
Orinasa kely manana trano misy WiFi ao amin'ireo toerana tratran'ny fahapotehana ary ireo toby mpandray ireo mpitsoaponenana ny Disaster Tech Lab. Ireo ny famantarana napetraka manodidina ny toby hampahafantarana ny fisian'ny fahazoana Aterineto. Hita ao ihany koa ny sarintany misy ireo toerana ahazoana Aterineto. Toby Mytilene, Moria, 29/12/2015. Sary an'i Chris Gioran ary nampiasaina ny fahazoandalana Iraisampirenena Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0.
Ho fanampin'ireny fanamby ireny, maro ireo mpitsoaponenana mety ho voasandok'ireo te- hanararaotra ireny fahasarotam-piainana ireny. Nahita i Leung fa lasa nisy varomaizina niforona mihitsy tao amin'ireo toby maron'ny mpitsoaponenana:
Eo ambany vahohon'ireo afaka manana teknolojian-tserasera sy miandraikitra ny fahazoana azy io ireo olona nafindra monina. Tena mety hitombo be ny saran'ny fampiasàna ny teknolojian-tserasera rehefa tratran'ny kolikoly ireo tomponà finday ao amin'ny tobin'ny mpitsoaponenana, na koa hoe tantanan'ilay varomaizina ireo toeram-pifandraisana eo amin'ny tanàna.
Mba hiatrehana ireny fanamby ireny, manampy ireo mpitsoaponenana mila miserasera ireo olon-tsotra sasany. Ilias Papadopoulos, injeniera Grika amin'ny herinaratra, nanome fahazoana Aterineto maimaimpoana ho an'ireo rehetra any Idomeni, tanàna kely Grika any amin'ny sisintany miaraka amin'i Mekedonia.
Milazalaza ny fomba namoronany sehatra hanomezana io tolotra io maimaimpoana ito lahatsary YouTube ito:
Hitany fa nanana smartphones ny ankamaroan'ireo mpitsoaponenana, fa tsy nisy karatra SIM na fahazoana Aterineto azo ianteherana, tsy nanana fomba tena ahafahana mifanerasera izy ireo. Noho izany, nanapa-kevitra ny hanao fanampiana hahafahana misitraka kokoa izy.
‘Mila fahaizana mamorona be io’
Efa nanandrana ny hamaly ny antso hahazoana serasera tsaratsara kokoa ho an'ireo mpitsoaponenana ireo orinasa kely sy fikambanana tsy miankina maro. Nametraka tambajotra WiFi tao amin'ny toby Moria sy Kara Tepe any Lesvos, Gresy, ilay fikambanana The Disaster Tech Lab mitoetra any Irlandy. Nomarihany fa mpitsoaponenana maherin'ny 400.000 isa no nampiasa ny tambajotran'izy ireo nandritra ny fipetrahan'izy ireo tao amin'ilay toby. Nampian'izy ireo hoe:
Fanampin'ireo tombotsoa hita mivangana amin'ny fahafahana mifandray amin'ireo namana sy fianakaviana, nisy ihany koa ny fangatahana hoe mba hatao amin'ny alalan'ny antso amin'ny Skype ny fangatahana fialokalofana an-tanin'olona. Ho fanampin'io, natsangana ihany koa ireo sekoly sy ivotoeram-pianarana, ankehitriny hoe efa maharitra ela ihany ireo toby, ary mazava ho azy, mila fahazoana miditra amin'ny Aterineto izany rehetra izany.
Nanao ho laharampahamehana ny fahazoana Aterineto ao amin'ireo ivontoerana fandraisana any Eorôpa Andrefana ireo vondrona hafa, satria matetika ny governemanta no tsy manana tetibola ho an'ny fahazoana Aterineto atao amin'ireo efitra fandriana.Ny fanomezana Wifi maimaimpoana ao amin'ny toerana fandraisana ny mpitsoamponenana ao Fliegerhorst any Fuerstenfeldbruck, no tetikasa voalohan'ilay fikambanana Alemàna an'ireo Refugees Online e.V., ary amin'izao, miparitaka amin'ireo toerana 95 manerana ny firenena ilay tetikasa. Ho fanampin'ilay fahazoana Aterineto, nanome fanofanana sy sehatra fampianarana tamin'ny Aterineto ho an'ireo mpangataka fialokalofana ihany koa ilay fikambanana.
Ary misy orinasa kely eo am-panitarana ny antsoiny hoe ” wifi matanjaka mahaleotena ho an'ireo faritra ivelany sy tratran'ny kirizy.” Miasa mba hanangona ireo vola ilaina hanamboarana ilay karazany haparitaka any amin'ireo toerana tena mila izany ilay orinasa antsoina hoe MeshPoint.
Ao amin'ny blaogin'izy ireo, nohazavain'izy ireo ny fomba niatombohan'ilay tetikasa tamin'ny faraparan'ny taona 2015, raha tonga maro tany amin'ny sisintanin'i Kroasia ireo mpitsoaponenana maro, ary noraisin'ny governemanta. Lazalazain'izy ireo ny fomba nahatongavan'ireo vondrona samihafa teo an-tsehatra mba hanome fanampiana.
Tao anatin'izy ireo, nisy ireo mpirotsaka an-tsitrapo an'ny Osijek an'ny Otvorena Mreža (Tambajotra Misokatra), hetsiky ny Open Source manana tanjona ny hanome Aterineto maimaimpoana ho an'ny rehetra. Namadika ‘router’ fahazoana Aterineto an-trano fotsiny izy ireo, nametraka OpenWRT, nametaka “clé USB 3G”, nampifandray ilay ‘router’ Aterineto taminà vatoaratra, namehy ireo rehetra ireo tao anaty sakaosy, ary nandeha tany amin'ireo vahoaka niaraka tamin'ny marika tnyan-damosiny hoe “WiFi Maimaimpoana”, sy ireo “antennes” nivoaka.
Toa somary sarotrarotra ho an'ilay vondrona ny manandrana mandefa lavitra sy mametraka toerana raikitra hidirana aterineto maimaimpoana.
Mitaky fahaizana mamorona be ilay izy, ary maka fotoana betsaka noho ny noeritreretinao. Matetika tsy mandeha ny fitaovana tsy dia mahazo tambajotra tsara noho ilay vondrompihary herinaratra alefa solika, miakatra sy midina tampotampoka ny herinaratra ratsiratsy, ary misy fiarovana amin'ny rano ho an'ireo fitaovana tsy tia mandomando, avy eo misy ireo “câbles”… Aoka aho mba tsy hanomboka amin'ireo “câbles”.
Zavatra tsy mora ny miezaka mahazo vahaolana azo ekena, mba hamoronana wifi mora apetraka, hahazaka mpampiasa maherin'ny 100 miaraka mampiasa amin'ny fotoana iray. Ary izany no nitondra tamin'ny fiantombohan'ny tetikasa MeshPoint, satria izy ireo te-hitady vahaolana avy amin'ny tenany ihany.
Maherin'ny mpitsoamponenana an-tapitrisany no nanavatsava an'i Eorôpa an-dranomasina, ny taona 2015, araka ny Masoivohon'ny Firenena Mikambana Misahana ny Mpitsoaponenana. Hatramin'izao, ny taona 2016, maherin'ny 200.000 no tafita, mitsoaka herisetra any Syria, Afghanistan ary Iràka, ny ankamaroan'izy ireo. Tena zava-dehibe tokoa ho azy ireo ny fahazoana Wifi, na io hifandraisana amin'ireo fianakaviana na namana nilaozana, na hanamboarana ny fiainam-baovao aoriana. Antenaina ny hitohizan'ny ezak'ireo olon-tsotra sy fikambanana ireo, mba hanampy hanome ireo mpitsoaponenana io aron'aina manan-danja tokoa io.